आपराधिक रेकर्ड के हो? | Law & More BV
ब्लग » आपराधिक रेकर्ड के हो?
के तपाईंले कोरोना नियम तोड्नुभयो र जरिवाना लिनुभयो? त्यसोभए, भर्खरै सम्म तपाई अपराधिक रेकर्ड राख्ने जोखिममा भाग्नुभयो। कोरोना जरिवाना अवस्थित छ, तर त्यहाँ आपराधिक रेकर्डमा कुनै टिप्पणी छैन। प्रतिनिधि सभाको किनारमा आपराधिक रेकर्डहरू किन त्यस्ता छेस्को भएका छन् र उनीहरूले यो उपाय रद्द गर्ने छनौट गरेका छन्?
यदि तपाईंले कानून भ break्ग गर्नुभयो भने, तपाईं एक आपराधिक रेकर्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आपराधिक रेकर्डलाई "न्यायिक कागजातको निकासी" पनि भनिन्छ। यो न्यायिक कागजात प्रणाली मा दर्ता अपराध को एक सिंहावलोकन हो। अपराध र अपराध बीचको भिन्नता यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईंले अपराध गर्नुभयो भने यो सँधै तपाईंको अपराधिक रेकर्डमा रहनेछ। यदि तपाईंले कुनै अपराध गर्नुभएको छ भने, यो पनि सम्भव छ, तर यो सधैं मामलामा हुनु हुँदैन। अपराधहरू सानो अपराधहरू हुन्। अपराधहरू रेकर्ड गर्न सकिन्छ जब तिनीहरूलाई EUR १०० भन्दा बढीको सजाय, बर्खास्त वा EUR १०० भन्दा बढी जरिवाना लागी सजाय दिइन्छ। अपराध चोरी, हत्या र बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधहरू हुन्। कोरोना जरिवाना पनि EUR १०० भन्दा बढी दण्डात्मक निर्णयहरू छन्। त्यसकारण, अब सम्म, न्यायिक कागजातमा एक टिप्पणी गरिएको थियो जब एक कोरोना जरिवाना लगाइएको थियो। जुलाईमा, जरिवानाको स 100्ख्या १ 100००० भन्दा बढी थियो। न्याय र सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री ग्र्यापरहसले आफैंले जरिवाना लिएको छ र यसैले आफ्नै विवाहमा कोरोना नियमहरू पालना गर्न नसकेकोमा फौजदारी रेकर्ड भएपछि उनले यसमा जोड दिए।
आपराधिक रेकर्डले अपराधीहरूमा ठूलो असर पार्न सक्छ। जब तपाईं कामका लागि आवेदन गर्नुहुन्छ, VOG (राम्रो आचरणको प्रमाणपत्र) कहिलेका लागि आवेदन दिइन्छ। यो एक घोषणा हो जसले तपाइँको व्यवहारले समाजमा निश्चित कार्य वा स्थिति प्रदर्शन गर्न आपत्ति जनाउँदैन भनेर देखाउँदछ। आपराधिक रेकर्डको अर्थ यो हुन सक्छ कि तपाईंले VOG प्राप्त गर्नुहुन्न। त्यो अवस्थामा तपाईंलाई व्यायाम, शिक्षक वा बेलिफ जस्ता केही पेशा अभ्यास गर्ने अनुमति छैन। कहिलेकाँही भिसा वा निवास अनुमति अस्वीकार गर्न सकिन्छ। बीमा कम्पनीले तपाईंलाई सोध्न सक्छ कि तपाईं बीमा लागि आवेदन जब तपाईं एक आपराधिक रेकर्ड छ। यस्तो अवस्थामा तपाईं सत्य बताउन बाध्य हुनुहुन्छ। आपराधिक रेकर्ड को कारण तपाईं एक बीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न।
पहुँच र आपराधिक डाटा को भण्डारण
के तपाईंलाई थाहा छैन यदि तपाईंसँग अपराधिक रेकर्ड छ? तपाईं आफ्नो फौजदारी रेकर्ड न्यायिक सूचना सेवा (Justid) लाई एक पत्र वा ई-मेल पठाएर पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। जस्टिड न्याय र सुरक्षा मन्त्रालयको एक हिस्सा हो। यदि तपाइँ तपाइँको आपराधिक रेकर्डमा के साथ असहमत हुनुहुन्छ भने, तपाइँ परिवर्तनको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई सुधारको लागि अनुरोध भनिन्छ। यो अनुरोध Justid को मोर्चा कार्यालय मा पेश गर्नु पर्छ। तपाईंले अनुरोधमा लिखित निर्णय चार हप्ता भित्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। केहि अवधारण अवधिको अपराधिक रेकर्डमा भएका अपराधहरूको न्यायिक डेटामा लागू हुन्छ। कानूनले निर्धारण गर्दछ कि यो जानकारी कति लामो अवस्थित रहनु पर्छ। यी अवधिहरू अपराधको लागि भन्दा अपराधको लागि छोटो छन्। कुनै आपराधिक निर्णयको मामलामा, उदाहरणका लागि कोरोना जरिमानाको मामलामा, डाटा जरिबानाको पूर्ण भुक्तानी पछि years बर्ष पछि मेटिनेछ।
वकिललाई सम्पर्क गर्नुहोस्
किनकि कुनै आपराधिक रेकर्डले यति ठूलो नतिजा ल्याउँछ, वकीलको साथ जतिसक्दो चाँडो सम्पर्क गर्नु उचित हुन्छ यदि उदाहरणका लागि तपाईले कोरोनाफाइन पाउनुभएको छ वा कुनै अपराध गरेको छ। वास्तवमा त्यहाँ निश्चित समयावधि हुन सक्छ जसमा सार्वजनिक अभियोजकमा विपक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। कहिलेकाहिँ सजिलै जरिवाना तिर्न वा समुदाय सेवाको पालना गर्न सजिलो लाग्न सक्छ, उदाहरणका लागि कुनै आपराधिक निर्णयको मामलामा। जे होस्, एक वकील द्वारा स्थिति मूल्या have्कन गर्न राम्रो छ। सबै पछि, सरकारी वकील पनि गल्ती गर्न वा गलत दोषी स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, सार्वजनिक अभियोजक वा न्यायाधीश कहिलेकाँही जरिवाना लगाउने वा अपराध रेकर्ड गर्ने अधिकारी भन्दा बढी उदार हुन सक्छ। एक वकिलले जाँच गर्न सक्दछ कि जरिवाना उचित छ कि छैन र यदि तपाईंलाई अपील गर्नु राम्रो निर्णय हो भने तपाईंलाई सूचित गर्न सक्नुहुन्छ। वकिलले विपक्षको नोटिस लेख्न र आवश्यक परेमा न्यायाधीशलाई सहयोग गर्न सक्छ।
के तपाईं माथिको विषयमा कुनै प्रश्न छ वा हामी तपाईंलाई तपाईंको लागि के गर्न सक्दछौं जान्न चाहनुहुन्छ? कृपया वकिललाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् Law & More अधिक जानकारी को लागी। यदी तपाई पक्का हुनुहुन्न कि तपाईलाई वकिल चाहिएको छ कि छैन। हाम्रो विज्ञ र आपराधिक कानूनको क्षेत्र मा विशेषज्ञ वकिलहरु तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछन्।
अघिल्लो पोस्ट खारेज